विप्लव समुहले वार्ताको होहल्ला गरेर लाभ लिन खोज्यो : मन्त्री बास्कोटा | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more विप्लव समुहले वार्ताको होहल्ला गरेर लाभ लिन खोज्यो : मन्त्री बास्कोटा
विप्लव समुहले वार्ताको होहल्ला गरेर लाभ लिन खोज्यो : मन्त्री बास्कोटा
साउन २ गते, २०७६ - १७:३२
काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले वार्ताको होहल्ला गरेर विप्लव समुहले लाभ लिन खोजेको बताएका छन् । बिहिबार नियमित पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका बास्कोटाले संविधान मान्छौं र युद्ध छोड्छौं भनेर आए मात्र वार्ता हुने प्रष्ट गरे ।
बास्कोटाले अनुचित, गैरजिम्मेवार र असम्भव कुराहरु गरेर नहुने भन्दै वार्ताको बाहानामा हिंसालाई वैधानिकता प्रदान गर्ने काम सरकारबाट नहुने प्रष्टाए । उनले भने, ‘होहल्ला मच्चाएर प्रचारको लाभ लिने काम हुँदैन् । संविधान मान्छौं, युद्ध छोड्यौं भनेर आए एकै मिनेटमा समस्या सकिन्छ ।’
बास्कोटाले शर्तहरु राखेर वार्ता नहुने बताएका छन् । उनले सर्त राख्ने कुराले शक्ति सञ्चय गर्न खोज्ने रणनीति हुन सक्ने भन्दै सरकार त्यसमा सचेत रहेको प्रष्ट्याए । ‘वार्ताका लागि मान्छे छोड्नुपर्ने भन्ने हुँदैन । ५२ सालदेखि ६२ सालसम्म के भयो ?’ बास्कोटाले भने, ‘वार्ता गर्ने, छोड्ने फेरि शक्ति सञ्चय गर्ने ? फेरि त्यसकै दुस्चक्रमा फर्किने ? त्यसमा सरकार सचेत छ ।’
उनले कमजोर धरातलमा बसेर वार्ता नहुने बताएका छन् । ‘हिंसा गर्ने समुहले वार्ता गर्ने, गन्तव्य बिनाको वार्ता गर्ने भन्ने कुरा हिंसालाई बैधता गराउने कुरा जस्तो मात्रै हुन जान्छ कि जाँदैन ?’ बास्कोटाले भने ।
साउन २ गते, २०७६ - १७:३२ मा प्रकाशित